Ngabe ipampu ye-insulin ishukela kanjani? > Insulin
Isifo sikashukela insulin
Ngohlobo lwesifo sikashukela esincike ku-insulin, imijovo yama-hormone yenziwa kaningana ngosuku. Kwesinye isikhathi isidingo sokujova i-insulin ezindaweni ezingafanele kakhulu: ezokuhamba zomphakathi, ezikhungweni zomphakathi, emigwaqweni. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela esincike ku-insulin kufanele bathole ukuthi: iphampu ye-insulin - ukuthi iyini nokuthi isebenza kanjani. Le yithuluzi elikhethekile labanesifo sikashukela elifaka ngokuzenzakalela i-insulin emzimbeni womuntu.
Iphampu ye-insulin yenzelwe ukuphatha okuqhubekayo kwehormoni kwabanesifo sikashukela. Isebenza njenge-pancreas, lapho kubantu abaphilile bekhiqiza i-insulin. Iphampu ithatha indawo yamapeni wesirinji ngokuphelele, okwenza inqubo yokufaka ibe yemvelo ngokwengeziwe. I-insulin esebenza ngokushesha ifakwa yipampu. Ngenxa yalokhu, idepho yaleli hormone ayakhi, ngenxa yalokho, ubungozi bokukhula kwe-hypoglycemia lincane.
Amadivayisi wanamuhla awekho amakhulu ngosayizi, ahlanganiswe nebhande elikhethekile noma isembatho esinesiqeshana. Amanye amamodeli akuvumela ukuthi uqaphe izinga le-glycemia. Izinkomba zikhonjiswa esikrinini sedivayisi. Lokhu kukuvumela ukuthi uqaphe isimo futhi uphendule ngendlela esishintshana noshintsho ekugxileni kwe-glucose emzimbeni.
Ngenxa yokuqapha kwesikhathi sangempela, iziguli zingavimba ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia. Uma kunesidingo, iphampu ingabuyiselwa noma imiswe. Ngemuva kwalokho imodi yokulethwa kwe-insulin izoshintsha noma ukulethwa kuyeke.
Abaningi banesifiso sokuthi kubukeka kanjani iphampu. Le yithuluzi elincane elilingana ne-pager. Isebenza kumabhethri. Iphampu lelo lenziwa ngendlela yokuthi imvamisa ethile ifaka umthamo we-insulin emzimbeni. Kufanele ilungiswe ngudokotela ohambelayo ebheka imingcele ngayinye yesiguli ngasinye.
Idivayisi iqukethe izingxenye eziningana.
Iphampu ngokwayo, okuyi pump kanye nekhompyutha. Iphampu iletha i-insulin, futhi ikhompyutha ilawula ucingo.
Amandla we-insulin - ikhatrijini.
Ukufakwa Kwesethi. Siqukethe i-cannula (leyo ibizwa ngokuthi inaliti emincane epulasitiki), ama-tubules axhumanisa i-cannula nesiqukathi esine-insulin. Inaliti ifakwa kungqimba lwamafutha angaphansi kwesisu kusetshenziswa idivaysi ekhethekile bese ilungiswa ngofaka udaka. Shintsha leli khithi kufanele libe njalo ezinsukwini ezi-3.
Amabhethri wokusebenza okuqhubekayo kwensiza.
I-cartulin ye-insulin idinga ukushintshwa ngokushesha, njengoba umuthi uphela kuyo. Inaliti ifakwa kulezo zingxenye zesisu lapho kungumkhuba ukuphatha i-insulin usebenzisa ipeni lesirinji. I-hormone inikezwa ngama-microdoses.
Ukukhetha imodi yokusebenza
Kunezinhlobo ezimbili zokuphathwa kwaleli hormone: i-bolus ne-basal. Ukukhetha kwenziwa ngudokotela, kuye ngezimpawu zenkambo yesifo kanye nenani le-insulin edingekayo ukunxephezela leso simo.
Indlela ye-bolus icabanga ukuthi umthamo odingekayo umuthi ufakwa yisiguli ngesandla ngaphambi kokudla. I-insulin ihlinzekwa ngenani ledingekayo le-metabolism ye-glucose enikezwa ngokudla.
Kunezinhlobo eziningi ze-bolus.
I-bolus ejwayelekile. Umthamo uphathwa ngasikhathi sinye, njengalapho usebenzisa ipeni lesirinji. Isikimu esinjalo siyancomeka uma inani elikhulu lama-carbohydrate lingena emzimbeni lapho lidliwa.
I-bolus yesikwele. Inani elidingekayo le-insulin alifakwa manzi emzimbeni, kodwa kancane kancane. Ngenxa yalokhu, i-hypoglycemia ebangelwa ukufakwa kwengqondo kwenani elikhulu le-hormone egazini ingavinjelwa. Le ndlela iyathandeka uma umzimba uthola ukudla okuqukethe inani elikhulu lamaprotheni namafutha (lapho kudliwa izinhlobo ezinamafutha zenyama, inhlanzi). Lesi singeniso sinconyelwe abantu abahlushwa i-gastroparesis.
I-bolus ephindwe kabili iyinhlanganisela yendlela esezingeni nesikwele. Uma iphampu ye-insulin yesifo sikashukela isethwe ukuphatha umuthi nge-bolus ephindwe kabili, khona-ke ekuqaleni umthamo omkhulu we-insulin uzongena emzimbeni, futhi inani elisele lizophathwa kancane kancane. Le ndlela yokuphatha iyadingeka uma uhlela ukudla ukudla lapho kunokuqukethwe okuphezulu kwamafutha nama-carbohydrate. Izitsha ezinjalo zifaka i-pasta, efafazwe ngo-ukhilimu isoso noma ikhekhe ngo-bhotela ukhilimu.
I-Super bolus. Lolu hlobo lokufaka luyadingeka lapho kudingeka ukwanda kwesenzo se-insulin. Basebenzisa i-super bolus ezimweni lapho kuhlelwa ukuthi kudliwe ukudla okwenyusa ngokumangazayo ukugcwala koshukela: imigoqo emnandi noma okusanhlamvu kwasekuseni.
Lapho ukhetha indlela ye-basal, i-insulin izohanjiswa ngokuqhubekayo ngokohlelo olukhethiwe kumuntu othize. Le ndlela yakhelwe ukugcina amazinga aphezulu kashukela ngesikhathi sokulala, phakathi kokudla nokudla okulula. Amadivaysi akuvumela ukuthi usethe inani elidingekayo lama-hormone emzimbeni emzimbeni ngezikhathi ezikhethiwe.
Inketho yokubeka ihora ikuvumela ukuba:
ukunciphisa inani lamahomoni ahlinzekwa ebusuku (lokhu kungavimba ukwehla koshukela ezinganeni ezincane),
khuphula ukunikezwa kwe-hormone ebusuku ukuvikela i-hyperglycemia ezinganeni ngesikhathi sokuthomba (lokhu kucasulwa yizinga eliphakeme lama-hormone),
khuphula umthamo ekuseni kakhulu ukuvikela ukukhuphuka koshukela ngaphambi kokuvuka.
Khetha imodi yokusebenza efanelekile kufanele ihlangane nodokotela ohambelayo.
Ngemuva kokuthola ukuthi ipompo isebenza kanjani, abantu abaningi abathembele nge-insulin nabazali bezingane ezinesifo sikashukela sohlobo 1 bacabanga ngokuthengwa kwayo. Le divayisi ibiza kakhulu, kepha ku-Federation kunezinhlelo zabanesifo sikashukela, esingathelwa mahhala le divayisi mahhala. Kuliqiniso, izakhi zalo kusazodingeka ukuthi zizithenge ngokwazo.
Ukufakwa kwe-insulin, okunikezwa ipompo, kwenzeka ngaso leso sikhathi. Ukusetshenziswa kwama-hormone we-Ultra-amafushane nawenziwe ngamafuphi kusiza ukuvimbela ukuguquguquka kokuhlushwa kwe-glucose.
Izinzuzo zale divayisi zihlanganisa:
ukunemba okuphezulu kakhulu kwe-dosing kanye nokuthi kungenzeka ukusebenzisa ama-microdoses e-hormone: igxathu ledosi elilungiselelwe le-bolus lingashintshwa ngokunemba kwe-0.1 PIECES, ngamapeni wesirinji, ukulungiswa kungenzeka ngaphakathi kwe-0.5-1 PIECES,
Ukuncishiswa kwezikhathi eziyi-15 kunani lezipikili ezenziwe,
amandla okubala ngokunembile umthamo we-bolus oludingekayo, ukukhetha kwendlela yokuphatha kwayo,
Ukuqapha njalo kwamazinga kashukela: ngokukhuphuka kokuhlushwa kwepampu, kunikeza isibonakaliso, amamodeli wesimanje angalungisa isilinganiso sokuphathwa komuthi ngokwawo aze afike ekuphelisweni okuphelele kokuhlinzeka lapho kwenzeka i-hypoglycemia,
ukulondolozwa kwemininingwane yemithamo ephethwe, amazinga kashukela ememori ezinyangeni ezi-6 zokugcina: imininingwane ingadluliselwa kwikhompyutha ukuze ihlaziywe.
Le divayisi ibaluleke kakhulu ezinganeni. Ikuvumela ukuthi uthuthukise ikhwalithi yempilo yeziguli ezisencane nabazali babo.
Odokotela batusa ukuthi bacabange ngokuthenga iphampu yokuthola abanesifo sikashukela emacaleni alandelayo:
ukungakwazi ukunxephezela isifo sikashukela,
Izinhlobo eziyinkimbinkimbi zesifo sikashukela, lapho kuvela khona ubunzima obukhulu,
ubudala bufika eminyakeni eyi-18 ngenxa yobunzima ekukhetheni nasekuphatheni umthamo odingekayo we-insulin,
I-ekuseni dawn syndrome (ukugxila koshukela kuphakama kakhulu ngaphambi kokuvuka)
isidingo sokuphathwa njalo kwe-insulin ngamanani amancane.
Iphampu nayo iyanconywa kwabesifazane abakhulelwe kanye nabantu abanokuphila okusebenzayo. Ungamane uthenge iphampu ye-insulin uma isiguli sifuna ukwenza impilo yaso ibe lula.
Iziguli zingazihlela ngokwazo amaphampu anamuhla. Naphezu kokuthola ukuphathwa okuzenzakalelayo kwe-insulin nokubeka umthamo ngudokotela, abantu bayabandakanyeka ekwelashweni. Kumele kuqondwe ukuthi i-insulin esebenza isikhathi eside ayingeni egazini likashukela. Uma idivaysi iyeka ukusebenza ngesizathu esithile, lapho-ke izinkinga zingakhula ngemuva kwamahora ama-4. Ngemuva kwakho konke, isiguli singaba ne-hyperglycemia kanye ne-ketoacetosis yesifo sikashukela.
Ngakho-ke, kwezinye izimo akusikisela ukusebenzisa iphampu yesifo sikashukela. Contraindication ifaka:
ukunciphisa umbono lapho kungenakwenzeka ukulungisa (amalebula wokufunda esikrinini kunzima),
ukwenqatshwa kwesidingo sokubala inkomba ye-glycemic yemikhiqizo, ukungathandi ukufunda ukuthi usebenza kanjani nedivaysi.
Kumele kuqondwe ukuthi idivaysi ngokwayo ayikwazi ukuguqula isimo sesifo sikashukela sohlobo 1 sikashukela. Kumele aqaphe ukudla futhi aphile impilo esebenzayo.
Izici zokukhethwa kwezinto zokusebenza
Uma umuntu onesifo sikashukela enikezwa iphampu ye-insulin mahhala, khona-ke akudingeki ukhethe. Kepha uma uhlela ngokwakho ukuthenga le divayisi ebizayo (futhi intengo yayo ifinyelela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingama-200), khona-ke kufanele uzijwayeze ngalokho okudingeka unake.
Umthamo wethangi kufanele ube unele ezinsukwini ezi-3 zokusetshenziswa - lokhu imvamisa yokushintsha kwesethi yokumiliselwa, ngalesi sikhathi ungakwazi ukugcwalisa ibhokisi.
Ngaphambi kokuthenga, kufanele ubheke ukugqama kwezinhlamvu ezikrinini kanye nokukhululeka kwamalebula okufunda.
Linganisela isikhathi sokubonisa imithamo ye-insulin. Ezinganeni kufanele zikhethe amadivayisi ngesinyathelo esincane.
Ukuba khona kwesibali esakhelwe ngaphakathi: kunquma ukuzwela kwe-insulin, i-carbohydrate eyanele, ubude besikhathi se-insulin kanye ne-glucose ehlosiwe.
Ukuba khona nokuzwela kwesiginali ye-alamu ngesikhathi sokukhula kwe-hypoglycemia.
Ukumelana namanzi: kukhona amamodeli angawesabi amanzi.
Amandla wokusetha amaphrofayili ahlukile ukuphathwa kwe-insulin ngokwendlela ye-basal: shintsha inani le-hormone elimele ngamaholide, ngezimpelasonto, setha imodi ehlukile yezinsuku zaphakathi nesonto.
Amandla okukhiya izinkinobho ukugwema ukuwacindezela ngephutha.
Ukuba khona kwemenyu ye-Russian.
Lawa maphuzu kufanele acatshangwe ngaphambi kokuthenga. Uma kusebenza idivaysi oyikhethayo, kuzoba lula kakhulu ukuqapha isimo.
Ngaphambi kokuthenga idivaysi ebizayo kangako, abantu banesifiso sokuzwa impendulo evela kwabanesifo sikashukela ngamaphampu we-insulin abanolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-20. Uma sikhuluma ngezingane, khona-ke le divayisi ingasiza kakhulu impilo yayo. Ngemuva kwakho konke, ingane esikoleni ngeke yenze ukudla okulula kube yisidingo sikashukela ngesikhathi esichazwe ngokuqinile futhi ngeke imnikeze i-insulin. Nge-pomp, ukuxazulula lezi zinkinga kulula kakhulu.
Ebuntwaneni, ukuthi kungenzeka ukuphatha i-insulin kuma-microdoses nakho kubalulekile. Ekukhuleni, kubalulekile ukunxephezela lesi simo, ukugxila kwe-glucose kungahlukahluka ngenxa yokungasebenzi kahle kwesizinda se-hormone ngesikhathi sokuthomba.
Abantu abadala kule divayisi bahlukile. Njengoba benesipiliyoni seminyaka eminingi ekuzisebenziseni kwe-hormone, abanye bacabanga ukuthi ipompo lingukuchitha imali. Ngaphezu kwalokho, izinto ezidingekayo ezidinga ukuthengwa nokushintshwa zibiza kakhulu.
Kulula ngabo ukuthi bafake umthamo obaliwe we-insulin ngaphansi kwesikhumba. Abanye besaba ukuthi i-cannula izovaleka, i-hose izogobela, iphampu uqobo izobamba, iphume, amabhethri ayohlala phansi, futhi iphampu iyeke ukusebenza.
Vele, uma kunokwesaba kwesidingo sokwenza imijovo yansuku zonke, khona-ke kungcono ukukhetha iphampu. Futhi, kufanele kukhethwe abantu abangenawo amandla okuphatha i-hormone ngaphambi kokudla ngakunye. Kepha kungcono ukubonana nodokotela oyi-endocrinologist.
Amaphampu we-insulin ayindlela yokwelashwa kwesifo sikashukela, okuthi, ngokwezinhlelo ezihleliwe zansuku zonke, afake insulin ezicutshini ezisetshenziswayo, aqhubeke enza lezi zithombe zikashukela egazini ziqhubeke njalo.
ithangi elingena esikhundleni
izinto eziguqukayo zokujova okuqondile kwe-hormone kuzicubu eziqondayo (inaliti emincane, i-catheter ne-tube yokuxhuma).
Umzimba wedivayisi unamathiselwe ngebhande elikhethekile noma okokugqoka usebenzisa isiqeshana, i-catheter ifakwa ngaphansi kwesikhumba futhi ifakwe n udaka. I-hormonal ingena ku-catheter isuka endaweni yokugcina amanzi nge-tube yokuxhuma, bese kuthi i-catheter uqobo ishintshe njalo ezinsukwini ezintathu. Lokhu kukuvumela ukuthi unciphise inani lemijovo kusuka ku-4-5 lapho usebenzisa amapeni wesirinji, kuze kufike 1 ezinsukwini ezintathu. Lapho isitolo sezidakamizwa singenalutho, kufanele sithathelwe indawo ngokushesha leso.
Iphampu ye-insulin isethelwe esikhungweni sezokwelapha, lapho kusethwa khona amapharamitha wokufaka we-hormone bese isiguli siqeqeshwa ekuphathweni kokusebenza kwensiza. Idivayisi isebenzisa kuphela i-insulin yesenzo esifushane ne-ultrashort, esivimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga ezithile zesifo sikashukela. Le ndlela yokuqinisa i-insulin yokwelashwa ibonwa njengethembeke kakhulu futhi ephumelelayo ekwelapheni isifo sikashukela.
Njengoba isiguli ngasinye sinezimpawu zalo zomzimba, inkambo yesifo kanye nemithamo edingekayo ye-hormone, iphampu ye-insulin ilungiselelwe amazinga ama-2 okusebenza okusebenzayo:
"Umuthi we-basal." I-insulin ifakwa ngokuqhubekayo kwezicubu ezingasukeli ngokuya ngecebo lokuhlangana ngalinye, okuhloswe ngalo ukugcina amazinga e-glucose ajwayelekile ngesikhathi sokuphumula (ukulala) kanye nezikhathi eziphakathi kokudla nokudla okulula. Ngasikhathi sinye, isilinganiso esithile sokuphuza ama-hormone ngasikhathi esinqunyiwe ngesinyathelo esinqunyiwe sokuguquguquka samayunithi angu-01 setiwe. ngehora.
"Bolus". Ihanjiswa ngokushesha ngaphambi kokudla futhi ibalwa kususelwa engxenyeni ye-carbohydrate, izinga le-glucose ngesikhathi kungeniswa i-hormone kanye nokuba khona kokuzivocavoca umzimba okulandela isidlo. Lokhu, kusetshenziswa uhlelo lomsizi okhethekile kwimenyu yedivayisi. Le ndlela yokulawulwa kwe-insulin isetshenziselwa ukwenza ngokwejwayelekile i-glucose ephezulu.
Amaphrofayili we-Basal Dose
Njengoba isiguli ngasinye sinezimpawu zomuntu ngamunye nezidingo zomuthi othile wesidakamizwa, amaphampu e-insulin enza ukuthi kulungiswe amaphrofayili wehora wokuphathwa kwama-hormone:
umthamo we-basal wehlisiwe wesikhathi sasebusuku, odingekayo ukuvikela ukwehla kwamazinga kashukela, wezingane ezincane,
ukukhulisa umthamo we-basal wesikhathi sasebusuku, okudingekayo ukuvikela amazinga aphezulu kashukela okubangelwa ama-hormone kubafana namantombazane ngesikhathi sokuthomba,
andise umthamo we-basal esikhathini kusuka ku-5 kuye ku-6 ekuseni, okudingekayo ukuvikela ukwenzeka kwe "kusa kokusa".
Ngokulungiswa okuhle kokunikezwa kwe-hormone emfishane noma ye-ultrashort, umsebenzisi wensiza angasetha enye yezindlela ze-bolus. Lokhu kuzosiza ngokuqhubeka kwesikhathi ukufunda ukuthi ungakukhetha kanjani ukwahluka okuphelele kakhulu kokufaka kwe-insulin nganoma yiluphi uhlobo lokudla, ukugcina ushukela uhlala usezingeni elijwayelekile.
I-Bolus "Okujwayelekile". Umthamo uphathwa ngasikhathi sinye futhi uyafana nomgomo kumjovo ojwayelekile. Leli fomu lihlanganiswe ngokuphelele nokusetshenziswa okulandelayo kokudla okune-carb ephezulu nezitsha.
I-bolus yesikwele. Umthamo onjalo we-insulin ulawulwa ngokuhamba kwesikhathi, okunciphisa ingozi yokuncipha okubukhali kwe-glucose ngokushesha ngemuva kokuba i-hormone ingene egazini. Ifomu lesikwele lokuphatha linweba isikhathi sesenzo se-insulin, esilungele ukudla izitsha ezinokuqukethwe okugcwele kwamafutha namaprotheni (inyama ethosiwe, inhlanzi enamafutha). Ukuphathwa isikhathi eside kwe-hormone kuyanconywa nakwiziguli ezine-gastroparesis.
I-bolus ephindwe kabili ifomu elihlanganisiwe lezinhlobo ezimbili ezedlule zokulawulwa kwe-insulin ye-ultrashort.Iphampu ye-insulin elungiselelwe ukuphathisa i-hormone ekubhalweni kwe-Double Bolus izokhipha umthamo wokuqala ophakeme bese iphatha i-insulin ekuhambeni kancane kancane, okufana ne-Square Bolus. Le ndlela ye-bolus ilungele ukusetshenziswa okulandelayo kokudla okuphezulu kumakhabhohayidrethi kanye namafutha (ibhisikidi likashokoleti, i-pasta enosawoti oshukela)
I-Super Bolus iyindlela yokukhulisa imiphumela yokulethwa kwe-insulin ejwayelekile. Kuyadingeka lapho umsebenzisi wempompo esezodla ukudla okwandisa mashukela egazi (okusanhlamvu okusamnandi kwasekuseni, imigoqo emnandi).
Ungayikhetha kanjani idivaysi?
Ukuqonda ukuthi iliphi iphampu le-insulin elilungele wena, udinga ukunaka lezi zinhlaka ezilandelayo lapho uthenga idivaysi:
Ama-dose wokubala azokuvumela ukuthi uguqule umthamo owuthandayo ngokunemba kwamayunithi angu-0, okubalulekile lapho uthatha i-insulin esebenza egazini. Lapho usetha umthamo, udinga ukufaka ama-coefficients wokudla ngokunembe ngangokunokwenzeka, izinga ushukela ojwayelekile kumsebenzisi, i-sensitivity coeffnty kanye nesikhathi se-hormone esebenzayo.
Inani eliphansi lomthamo we-basal ngehora libonisa ukuthi lingakanani okungenani iphampu elingaletha ngaphakathi kwehora. Le nqubo ibaluleke kakhulu lapho ukhetha ithuluzi lokwelapha isifo sikashukela ezinganeni ezincane. Umthamo omncane wamaphampu wanamuhla we-insulin iyunithi engu-0.01.
Isinyathelo sokulethwa kwe-bolus kubalulekile lapho ubeka umthamo ngqo wokulungiswa kweshukela nokudla. Kubalulekile ukuthi hhayi kuphela isinyathelo esisethiwe, kodwa futhi nokuthi kungenzeka ukuthi ufake inani ngokuzimela (ungacindezeli inkinobho izikhathi eziyi-100 ukusetha amayunithi we-insulin eziyishumi ngezinyathelo ze-0,1, kepha faka ngokushesha inani le-10).
Inani lezikhathi zokuvalwa kwe-basal kubalulekile ekunqumeni umthamo olungiselelwe we-insulin phakathi nesikhathi ngesikhathi ngasinye sokuphumula. Ukuzilolonga kukhombisa ukuthi izikhawu ezingama-24 zanele.
Amaphrofayili we-basal insulin ayasiza ekushintsheni ukuphathwa kwe-insulin ngezinsuku ezahlukene zokuphila. Isibonelo, ngamaholide nangezimpelasonto, lapho inani lokudla kwe-carbohydrate lingaphezu kokujwayelekile, kusethwa iphrofayili eyodwa yokudla kwe-insal. Izinsuku zaphakathi nesonto, ungahlela ifomu lokufaka elinomusa kakhudlwana. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi mangaki amaphrofayili anjalo amaphampu we-insulin angagcina engqondweni. Ukubuyekezwa komsebenzisi kwamadivayisi anjalo kukhombisa ukuthi amaphrofayili angaphezu kwamathathu awadingeki.
Isaziso sokungasebenzi kahle siyadingeka ukuze umsebenzisi akwazi ukwengeza i-hormone ngezindlela ezingafani (i-insulin) ngesikhathi sokuhluleka kwe-insulin (umjovo). Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi ibhethri lishone ngokuzumayo noma isidakamizwa siphele ethangini.
Imemori ese kudivayisi iyadingeka ukuze sikwazi ukuhlaziya imithamo efakiwe kanye nama-glucose indices ukuze ulungise ngokunembile irejimeni yokulethwa kwe-insulin ngokuzayo.
Ukuvumelanisa ne-PC kuzosiza ukubonisa imininingwane egciniwe evela kumpompo osesikrinini ukuze kuhlaziywe futhi kulungiswe umthamo, ngokubheka komlando wokusetshenziswa kwephampu.
Ukuba khona kwesilawuli kude kuzosiza ukulawula iphampu ye-insulin ngaphandle kokuyisusa entabeni. Lokhu kubaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela ezithola ukungakhululeki ngokwengqondo lapho zisebenzisa le divayisi ebantwini.
Umsebenzi wokukhiya izinkinobho uzosiza ukuvikela impompo kusuka ezinkingeni zomsebenzi wokucindezela ngengozi.
Imenyu yeRussia enesibopho iyadingeka kulabo abangasikhulumi kahle isiNgisi.
Ngubani okhonjiswa ukusetshenziswa kwamadivaysi anjalo?
Iphampu ye-insulin inconywa ochwepheshe ukufaka iziguli zesifo sikashukela kulezi zimo ezilandelayo:
lapho into yokusa yokusa ikhona
iziguli ezinezinhlobo eziyinkimbinkimbi zesifo sikashukela,
abanesifo sikashukela abanezinkinga ezinzima,
lapho ukuzwela kwe-insulin kuphezulu kakhulu
Fihla lesi sifo uma kunesidingo.
Izinzuzo kanye nokubi
Inzuzo enkulu yokusebenzisa iphampu ye-insulin yabanesifo sikashukela ukuthuthuka okubukhali kwikhwalithi yempilo lapho ungadingi ukuhlala ukhathazeka ukuthi ungakhohlwa ngomjovo olandelayo we-hormone. Kusiza kakhulu ezimweni lapho kungakhululeki ngokwengqondo ukuthi isiguli siphathe i-insulin ngepeni yesirinji emphakathini (kude, emsebenzini, emgwaqweni, kwezokuhamba). Amaningi azibonele inkululeko eyinqayizivele kusuka esimisweni esiqinile sokudla nokuzivocavoca, okwakudingeka ngaphambilini ukuze enze ushukela abe muncu.
Impompo ye-insulin yenza ukuthi kubalwe futhi kunikezwe umthamo ngqo, okwenza ukuthi lesi sifo sichitheke emzimbeni futhi kuvimbele ukukhula kwezinkinga ezinkulu. Abasizi bohlelo olwakhelwe ngaphakathi balungisa umthamo we-insulin ezimweni ezicindezelayo zomzimba wesifo sikashukela (amadili, ukudla kakhulu).
Ukuphela kwendlela yokwelashwa kwe-insulin izindleko eziphakeme zedivayisi nezinto ezisetshenziswa njalo ngenyanga.
Iziguli ezinesifo sikashukela kufanele ziqonde ukuthi iphampu ye-insulin akuyona i-panacea yalesi sifo, ngakho-ke, ngaphezu kwezinzuzo zako, udinga ukwazi ukuqaphela, imithetho yokusebenzisa kanye nezici zendlela ngokwayo:
amamojula wokushintsha izinkomba ze-glycemia ezakhelwe epompeni zisebenza ngokusebenzisa inzwa ekhiqiza umphumela ngokulibaziseka kwemizuzu engamashumi amabili. Ngakho-ke, ekukhetheni ngempumelelo umthamo, kufanele usebenzise futhi i-glucometer,
amaphampu e-insulin awakwazi ukubala ngokuzimela imithamo ngayinye, ahlomile kuphela ngamanani wokubala enza lokhu ngokuya ngezinto ezifakwe ngumuntu,
Lapho usebenzisa iphampu ye-insulin, ngaso sonke isikhathi kudingeka ube nepeni yesirinji nawe, ngoba kunezimo ezahlukahlukene lapho iphampu lingakwazi ukuletha umthamo we-insulin ngesikhathi (ibhethri liphela, i-hormone esethangi iyaphela, njll.),
ukuze iphampu isebenze, okudingekayo kuyadingeka, okubiza cishe ama-ruble ayi-6,000 ngenyanga,
uma udinga ukugeza, iyunithi yokulawula ingavalwa, kepha ingabi ngaphezu kwehora nesigamu. I-catheter ingambozwa ngesembozo esikhethekile esivikela inaliti emanzini,
inaliti, efakwe ngaphansi kwesikhumba, inosayizi omncane kakhulu, ngakho-ke ingavalwa futhi iholele ekuphathweni okwanele kwe-insulin kwezicubu. Udinga ukuguqulwa njalo ezinsukwini ezi-3.